သားလေးကြီးလာရင်ဖတ်ဖို့အတွက် သူမရဲ့ အတွေ့အကြုံနဲ့ ဖြစ်စေချင်တဲ့ ခံယူချက်တွေကို ရေးသားထားတဲ့ စာလေးကို ဖော်ပြလာခဲ့တဲ့ ပိုးအိအိခန့် - TGI Daily News
ပရိသတ်ကြီးရေ မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင် တိုက်စစ်မှူးကစားသမား အောင်သူနဲ့ မင်းသမီးချောလေး ပိုးအိအိခန့် တို့က သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ မိသားစုလေးကို တည်ဆောက်ထားပြီး အေးချမ်းစွာနေထိုင်နေတဲ့ ပြည်သူ့အချစ်တော်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့ ပါးဖောင်းဖောင်းလေးနဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သားလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ယနေ့မှာဆိုရင် သားလေးမွေးလာတာဟာ ၁နှစ်နဲ့ ၅လပြည့်ရှိလာခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်သူမရဲ့ သားလေး အသက်၁နှစ်နဲ့ ၅လပြည့်သွားတာကြောင့် ပိုးအိအိခန့်က ကြီးလာရင် သားလေးဖတ်ဖို့အတွက် မိဘမေတ္တာရဲ့ ရင်တွင်းခံစားချက်တွေနဲ့ ရေးသားထားတဲ့ စာလေးဖော်ပြလာခဲ့ပါတယ်။
” သားလေးရေ……ဒီစာလေးက 19.12.2020 မှာ အသက် ၁ နှစ်၅လပြည့်သွားပြီဖြစ်တဲ့ မေမေ့ သားလေးအတွက် သားလေးကြီးလာရင် ဖတ်ဖို့ မေမေရေးထားတဲ့ စာပါ ……မေမေ့ စိတ် မေမေ့အတွေ့အကြုံ မေမေ့ ခံယူချက်တွေကို ထည့်ရေးထားတဲ့ စာတွေဆိုလည်း မမှားပါဘူး…သားလေးရေ ဒီကမ္ဘာလောကကြီးမှာ လူရယ်လို့ ဖြစ်လာပြီဆိုရင် ဘက် ၂ ဘက်ကို ကြည့်တတ်အောင် ကြိုးစားပါ ဘက် ၂ ဘက် ဆိုတာ သူ့ဘက် နဲ့ ကိုယ့်ဘက်ကို ပြောတာပါ…..ကိုယ်ခံစားရတာပဲ ကြည့်တတ်သူဆိုရင် သားလေးလူဖြစ်ရှုံးမှာပေါ့သားရယ်……ကိုယ်ခံစားရတာလည်း ကြည့်သလို သူရော ခံစားရလားဆိုတာပါ ထည့်စဉ်းစားပေးမှ သားလေးလူကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်မှာပေါ့သားရယ်….
ဘဝ မှာ အတတ်နိုင်ဆုံး ပေးနိုင်တဲ့သူဖြစ်အောင်သာ ကြိုးစားပါ ….ပေးတဲ့သူရဲ့လက် နဲ့ ယူတဲ့သူရဲ့ လက်မှာ အဓိပ္ပါယ်တွေ ပီတိတွေ အများကြီး ကွာတာမို့… ဒါကို မေမေ အကျယ် တဝံ့မရှင်းပြတော့ဘူးနော် ဘာဖြစ်လို့လည်း ဆိုတော့ မေမေ ပြောသလိုသာ ပေးတဲ့လက်တစ်စုံဖြစ်အောင် သားလေးကြိုးစားခဲ့လို့ ပေးနိုင်တဲ့လက်တစ်စုံဖြစ်ခဲ့ရင် ပေးဆပ်ရခြင်းရဲ့ ပီတိကို သားလေးကိုယ်တိုင်ခံစားမိမှာ မေမေ ယုံကြည်ပါတယ်….
သားလေးရေ….ယောကျာ်းကောင်းဆိုတာ အရာရာ အဘက်ဘက်ကို မျှတစွာ နေနိုင် ပြောနိုင် ဆိုနိုင် ကျင့်ကြံနိုင်ရပါတယ်သားရေ “မဇ္ဇိမ ပဋိပဒ္ဒါ “တဲ့ အလယ်အလတ်လမ်းစဉ်ကိုသာ လိုက်ပါ သားရေအရာရာ သင့်တင့်ပြီး မျှတမှုကသာ တရားနည်းလမ်းကြလို့ပါသားရယ်
ကိုယ့်အပေါ် ကောင်းတဲ့ တစ်စုံ တစ်ဦး တစ်ယောက် အပေါ် ဘယ်တော့မှ အနိုင်မယူမိပါစေနဲ့နော် ….သည်းခံနိုင်တဲ့သူဆိုတာလည်း အတိုင်းအတာနဲ့မို့ သူတစ်ဖက်သားကို နှုတ်နဲ့သော်လည်းကောင်း ကိုယ်ဖြင့် သော်လည်းကောင်း နာကျင်အောင် သားလေးမလုပ်မိပါစေနဲ့လို့ မေမေ သတိပေးပါရစေ….သားလေးရေ….ဘဝမှာ လူတော်ထက် လူကောင်းဖြစ်ဖို့ အရင်ကြိုးစားပေးပါနော်…..မေမေကလည်း သားလေး သူတော်ကောင်းလေးဖြစ်ဖို့
မှားတာကို မှားနေမှန်းသိအောင် ၊ အရာရာမှာ မျှမျှတတ ကျင့်ကြံတတ်အောင် ၊ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တတ်တဲ့ကလေးလေးမဖြစ်အောင်၊အမှား အမှန် အဆိုး အကောင်းကို ခွဲခြားသိမြင်နိုင်တဲ့ကလေးလေးဖြစ်အောင် ဆုံးမ သွန်သင်ဖို့က မေမေ့တာဝန်ပါ ။
မေမေက သားလေးကို independence baby လေးဖြစ်အောင် ငယ်ငယ် ထဲက train ပေးမယ်နော်…..ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်တဲ့ အတွေးအခေါ် အသိဉာဏ် နဲ့ ကိုယ်ပိုင် ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ကလေးလေးဖြစ်ဖို့ သားလေးကို မေမေ အခွင့်အရေးတွေ ပေးမှာပါ မေမေ့ရဲ့ စေတနာ လွတ်လပ်ခွင့် ပေးတာလေးကိုတော့ ကောင်းမွန်တဲ့နေရာမှာပဲ အသုံးချဖို့ ကတိပေးရမယ်နော်….. ကလေးလေး သားလေးငယ်စဉ်ကတည်းက သားလေး ကို self decision လုပ်ခွင့် မေမေပေးခဲ့မှ သားလေးအရွယ်ရောက်လို့ အရေးကြုံတဲ့အခါ self decision ကို ဘယ်သူ့အကူအညီမှ မလိုဘဲ confidence ပြည့်ပြည့်ဝဝနဲ့ ချနိုင်မယ်လို့ မေမေယုံကြည်ပါတယ်သားလေးရေ…..Happy 1 year &5months birthday ပါ သားသားရေ” ဆိုပြီး မိဘတွေရဲ့ သားသမီးတွေအပေါ်မှာထားရှိတဲ့ မေတ္တာတွေပေါ်လွင်အောင် ဖော်ကျူးရေးသားထားပါတယ်။
သတင်းအရင်းမြစ်: Source – Poe Ei Ei Khant
သားလေးကွီးလာရငျဖတျဖို့အတှကျ သူမရဲ့ အတှအေ့ကွုံနဲ့ ဖွဈစခေငျြတဲ့ ခံယူခကျြတှကေို ရေးသားထားတဲ့ စာလေးကို ဖျောပွလာခဲ့တဲ့ ပိုးအိအိခနျ့
ပရိသတျကွီးရေ မွနျမာ့ဂုဏျဆောငျ တိုကျစဈမှူးကစားသမား အောငျသူနဲ့ မငျးသမီးခြောလေး ပိုးအိအိခနျ့ တို့က သာယာပြျောရှငျတဲ့ မိသားစုလေးကို တညျဆောကျထားပွီး အေးခမျြးစှာနထေိုငျနတေဲ့ ပွညျသူ့အခဈြတျောတှပေဲ ဖွဈပါတယျ။ သူတို့နှဈယောကျကတော့ ပါးဖောငျးဖောငျးလေးနဲ့ ခဈြစရာကောငျးတဲ့ သားလေးကို ပိုငျဆိုငျထားပွီး ယနမှေ့ာဆိုရငျ သားလေးမှေးလာတာဟာ ၁နှဈနဲ့ ၅လပွညျ့ရှိလာခဲ့ပွီး ဖွဈပါတယျ။ ဒါ့အပွငျသူမရဲ့ သားလေး အသကျ၁နှဈနဲ့ ၅လပွညျ့သှားတာကွောငျ့ ပိုးအိအိခနျ့က ကွီးလာရငျ သားလေးဖတျဖို့အတှကျ မိဘမတ်ေတာရဲ့ ရငျတှငျးခံစားခကျြတှနေဲ့ ရေးသားထားတဲ့ စာလေးဖျောပွလာခဲ့ပါတယျ။
” သားလေးရေ……ဒီစာလေးက 19.12.2020 မှာ အသကျ ၁ နှဈ၅လပွညျ့သှားပွီဖွဈတဲ့ မမေေ့ သားလေးအတှကျ သားလေးကွီးလာရငျ ဖတျဖို့ မမေရေေးထားတဲ့ စာပါ ……မမေေ့ စိတျ မမေအေ့တှအေ့ကွုံ မမေေ့ ခံယူခကျြတှကေို ထညျ့ရေးထားတဲ့ စာတှဆေိုလညျး မမှားပါဘူး…သားလေးရေ ဒီကမ်ဘာလောကကွီးမှာ လူရယျလို့ ဖွဈလာပွီဆိုရငျ ဘကျ ၂ ဘကျကို ကွညျ့တတျအောငျ ကွိုးစားပါ ဘကျ ၂ ဘကျ ဆိုတာ သူ့ဘကျ နဲ့ ကိုယျ့ဘကျကို ပွောတာပါ…..ကိုယျခံစားရတာပဲ ကွညျ့တတျသူဆိုရငျ သားလေးလူဖွဈရှုံးမှာပေါ့သားရယျ……ကိုယျခံစားရတာလညျး ကွညျ့သလို သူရော ခံစားရလားဆိုတာပါ ထညျ့စဉျးစားပေးမှ သားလေးလူကောငျးတဈယောကျဖွဈမှာပေါ့သားရယျ….
ဘဝ မှာ အတတျနိုငျဆုံး ပေးနိုငျတဲ့သူဖွဈအောငျသာ ကွိုးစားပါ ….ပေးတဲ့သူရဲ့လကျ နဲ့ ယူတဲ့သူရဲ့ လကျမှာ အဓိပ်ပါယျတှေ ပီတိတှေ အမြားကွီး ကှာတာမို့… ဒါကို မမေေ အကယျြ တဝံ့မရှငျးပွတော့ဘူးနျော ဘာဖွဈလို့လညျး ဆိုတော့ မမေေ ပွောသလိုသာ ပေးတဲ့လကျတဈစုံဖွဈအောငျ သားလေးကွိုးစားခဲ့လို့ ပေးနိုငျတဲ့လကျတဈစုံဖွဈခဲ့ရငျ ပေးဆပျရခွငျးရဲ့ ပီတိကို သားလေးကိုယျတိုငျခံစားမိမှာ မမေေ ယုံကွညျပါတယျ….
သားလေးရေ….ယောကျြားကောငျးဆိုတာ အရာရာ အဘကျဘကျကို မြှတစှာ နနေိုငျ ပွောနိုငျ ဆိုနိုငျ ကငျြ့ကွံနိုငျရပါတယျသားရေ “မဇ်ဇိမ ပဋိပဒ်ဒါ “တဲ့ အလယျအလတျလမျးစဉျကိုသာ လိုကျပါ သားရအေရာရာ သငျ့တငျ့ပွီး မြှတမှုကသာ တရားနညျးလမျးကွလို့ပါသားရယျ
ကိုယျ့အပျေါ ကောငျးတဲ့ တဈစုံ တဈဦး တဈယောကျ အပျေါ ဘယျတော့မှ အနိုငျမယူမိပါစနေဲ့နျော ….သညျးခံနိုငျတဲ့သူဆိုတာလညျး အတိုငျးအတာနဲ့မို့ သူတဈဖကျသားကို နှုတျနဲ့သျောလညျးကောငျး ကိုယျဖွငျ့ သျောလညျးကောငျး နာကငျြအောငျ သားလေးမလုပျမိပါစနေဲ့လို့ မမေေ သတိပေးပါရစေ….သားလေးရေ….ဘဝမှာ လူတျောထကျ လူကောငျးဖွဈဖို့ အရငျကွိုးစားပေးပါနျော…..မမေကေလညျး သားလေး သူတျောကောငျးလေးဖွဈဖို့
မှားတာကို မှားနမှေနျးသိအောငျ ၊ အရာရာမှာ မြှမြှတတ ကငျြ့ကွံတတျအောငျ ၊ တဈကိုယျကောငျးဆနျတတျတဲ့ကလေးလေးမဖွဈအောငျ၊အမှား အမှနျ အဆိုး အကောငျးကို ခှဲခွားသိမွငျနိုငျတဲ့ကလေးလေးဖွဈအောငျ ဆုံးမ သှနျသငျဖို့က မမေတေ့ာဝနျပါ ။
မမေကေ သားလေးကို independence baby လေးဖွဈအောငျ ငယျငယျ ထဲက train ပေးမယျနျော…..ကိုယျပိုငျလှတျလပျတဲ့ အတှေးအချေါ အသိဉာဏျ နဲ့ ကိုယျပိုငျ ဆုံးဖွတျနိုငျတဲ့ကလေးလေးဖွဈဖို့ သားလေးကို မမေေ အခှငျ့အရေးတှေ ပေးမှာပါ မမေရေဲ့ စတေနာ လှတျလပျခှငျ့ ပေးတာလေးကိုတော့ ကောငျးမှနျတဲ့နရောမှာပဲ အသုံးခဖြို့ ကတိပေးရမယျနျော….. ကလေးလေး သားလေးငယျစဉျကတညျးက သားလေး ကို self decision လုပျခှငျ့ မမေပေေးခဲ့မှ သားလေးအရှယျရောကျလို့ အရေးကွုံတဲ့အခါ self decision ကို ဘယျသူ့အကူအညီမှ မလိုဘဲ confidence ပွညျ့ပွညျ့ဝဝနဲ့ ခနြိုငျမယျလို့ မမေယေုံကွညျပါတယျသားလေးရေ…..Happy 1 year &5months birthday ပါ သားသားရေ” ဆိုပွီး မိဘတှရေဲ့ သားသမီးတှအေပျေါမှာထားရှိတဲ့ မတ်ေတာတှပေျေါလှငျအောငျ ဖျောကြူးရေးသားထားပါတယျ။
သတငျးအရငျးမွဈ: Source – Poe Ei Ei Khant